कमल थापाले स्वीकारे राणा समूहको ४० प्रतिशत ! - Dainik Nepal
कमल थापाले स्वीकारे राणा समूहको ४० प्रतिशत !
दैनिक नेपाल २०७४ साउन २८ गते १०:५९
काठमाडौं, २८ साउन । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले अन्ततः आफ्नो दल विभाजन हुने भयो भनेर हार स्वीकार गरेका छन् ।
रिपोटर्स क्लबमा बिहीबार पार्टी फुट्ने अर्थात राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) गठन गर्न वैधानिक संख्या पुगीसकेको संकेत गरे । पत्रकार सँगको अन्तरक्रियामा थापाले पार्टीभित्र विविध अवस्था पचाएर बसे पनि पार्टी फुट्ने निश्चित भएको बताएका थिए । पशुपति शम्शेर राणाको पक्षमा आवश्यक संख्या पुगेको संकेत गर्दै कुचोले बढार्नु पर्ने कसिंगर हावाले उडाएर लगेको बताएका थिए ।
स्मरण रहोस्, राजनीतिक दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या आवश्यक पर्ने कानूनी प्रवाधान छ । सो संख्या नपुगी पार्टी विभाजनले वैद्यानिकता प्राप्त गर्दैन । तर, राप्रपा अध्यक्ष थापाले पार्टी फुट्ने नै भयो भन्ने तथ्य संचारकर्मी समक्ष स्वीकार गरीसकेको अवस्था आफैमा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) गठन गर्न ४० प्रतिशत समर्थन पुगीसकेको प्रमाण रहेको पशुपति शम्शेर राणा समूहका एक प्रभावशाली नेता बताउँछन् ।
थापाको मलिनो स्वर, निन्याउरो अनुहार र खस्केको हााउभाउले पनि राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) गठन गर्न सफल भएको सो समूहका एक नेताको भनाइ छ ।
थापा पक्षधरले एकोहोरो रुपमा राणाको समर्थनमा ४० प्रतिशत नपुगेको भन्ने प्रचारबाजी गरे पनि कमल थापा स्वयंले राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) गठन हुने स्वीकार गरीसकेको अवस्था छ ।
‘हाम्रो पक्षमा ७५ जना केन्द्रीय सदस्यहरूको सनाखत भइसकेको छ । यो संख्या थापा पक्षधरले उल्लेख गरेको सांसदहरूबाहेकको आंकडा हो । त्यसकारण संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैतर्फ ४० प्रतिशत समर्थन पुगीसकेको अवस्था छ । यसमा सबै ढुक्क बसे हुन्छ’, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)का एक नेताले बताए ।
‘वास्तबमा ४० प्रतिशत पुगेन भनेर हामीले नै थापा पक्षधरलाई रणनीतिक रुपमा बताएका हौं । यस्तो ‘डिसइन्फर्मेसन’बाट तिनीहरू पूर्ण झुक्किएका छन्, हाम्रो रणनीति सफल भएको छ’, राणा पक्षका एक प्रभावशाली नेताले भने ।
पार्टी विभाजन नहोस् भनेर थापाले ४२ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेको बताएका थिए । तर, केन्द्रीय सदस्यहरू एकलौटी मनोनीत गर्दा पनि थापाले पार्टीभित्रको असुन्तुष्टिलाई छेक्न सकेनन् । यसमा पशुपति शम्शेर राणा सफल भएको सो पक्षको भनाइ छ ।
राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)ले सोमबारसम्म नयाँ दलको मान्यता पाउनेछ । स्रोतले भन्यो, ‘निर्वाचन आयोगले सोमबारसम्म पशुपति शम्शेर राणा नेतृत्वको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)लाई नयाँ दलको मान्यता दिन्छ ।’